Smartphones na igwefoto kachasị mma n'ahịa | Akụkọ akụrụngwa
Taa smartphones emeela ka ọ dịkwuo mma na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkọwa ha niile, mana na igwefoto. Ejiri igwe ma ọ bụ abụọ megapixels wepụta ngwaọrụ izizi ndị bịara ahịa n'ahịa ma taa ha enwegoro na njedebe a na-atụghị anya ya, yana ọnụ ọgụgụ anụ ọhịa nke megapixels yana ihe ndị anyị nwere ike ịhụ na obere igwefoto dị na ahịa ahụ.
N'ihi mmeziwanye a, onye ọrụ ọ bụla nwere ike iji foto mkpanaka ha were foto dị elu. Ọ bụrụ na ị na-eche ịgbanwere ngwaọrụ mkpanaka gị ma ị na-achọ onye nwere ezigbo igwefoto, na ndepụta a anyị mere taa anyị na-ewetara gị 10 smartphones nwere igwefoto kachasị mma n'ahịa, nke mere na mgbe e mesịrị ị nwere ike ịhọrọ iji data niile dị n'aka, ọ bụ ezie na mgbe ahụ n'ezie ihe ndị ọzọ na-achọpụta ihe ga-abata, dị ka ọnụahịa.
1 Kedu akụkụ nke igwefoto igwefoto anyị kwesịrị ile anya?
9 Samsung Galxy Rịba ama 3
Kedu akụkụ nke igwefoto igwefoto anyị kwesịrị ile anya?
N'agbanyeghị ihe ọtụtụ ndị ọrụ kwenyere na ọnụọgụ megapixels bụ njirimara kachasị mkpa ma a bịa n'inweta foto dị mma, nke a abụghị ikpe.. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ n'ime ngwaọrụ mkpanaka nwere pikselụ kachasị elu nke dị na ahịa anaghị achịkwa itinye na ndepụta a nke 10 smartphones nwere igwefoto kachasị mma na ahịa.
Na mgbakwunye na ọnụ ọgụgụ dị mma nke megapixels, ọ dị mkpa na ngwaọrụ mkpanaka nwere a ezigbo ihe mmetụta, ezigbo lens, ma ọ bụ ezigbo weghaara nhazi ihe oyiyi.
Ọ dịkwa ezigbo mkpa ka anyị lelee oghere kachasị elu nke igwefoto mgbe ị na-ahọrọ ama. Nke a na-egosi oke ọkụ nke nwere ike ịbanye na ihe mmetụta. Okwesiri ka o kwere mee ka anyi na ekwu okwu banyere ezigbo igwefoto f / 2.0 ma obu f2.
Enwere nkọwa ndị ọzọ anyị kwesịrị ile anya, mana obi abụọ adịghị ya na ndị bụ isi bụ ndị a. Cheta na igwefoto megapixel 41 ma ọ bụ ọbụlagodi 82 megapixel nwere ike dị njọ karịa igwefoto megapixel asatọ nke nwere ihe mmetụta dị mma na lens dị mma.
Ruo taa, ụlọ nke LG G4, dị ka anyị pụrụ ịhụ na nyochaa anyị mere nke ngwaọrụ Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ahịa. Na a Ihe mmetụta 16 megapixel, oghere anya nke f / 1.8 na ihe oyiyi OIS 2.0 kwụsiri ike anyị nwere ike ịnweta onyonyo nke oke mma n'ọnọdụ ọ bụla.
Nke ahụ bụ na LG G4 igwefoto nwere ike ịnweta nnukwu onyonyo n'ehihie, kamakwa n'ọnọdụ ndị gbara ọchịchịrị. Ihe niile ekwurula, anyị ga-arụtụ aka na ọ kwadebere ya na mgbado anya nke laser nke na-enye ohere nnukwu mmelite na agba, nke pụtara ngwa ngwa.
Na mgbakwunye, na iwepu oke mma nke igwefoto G4 a, ọ na-enye anyị ohere ịchekwa onyonyo n'ụdị RAW, dekọọ vidiyo na usoro 4K ma jiri ya na usoro ntuziaka maka ndị niile chọrọ ịga n'ihu ma pịgharịa ya dị ka igwefoto mpiaji.
Ogo igwefoto Samsung Galaxy S6 o buru ibu dị ka anyị hụworo na Galaxy S6 Eedge. Site na ihe mmetụta 16 megapixel isi na oghere oghere nke f / 1.9 ma ọnụ kwe ka anyị were onyonyo n'ụdị ọnọdụ ọ bụla, jiri ọkụ ma ọ bụ na enweghị ya ma were ụdị ọkụ ọ bụla.
N'akụkụ ya, igwefoto dị n'ihu dịkwa na 5 megapixel sensor nke ga-enye anyị ohere iwere ihe osise zuru oke na nke nwere oke mma.
Igwefoto nke Samsung Galaxy S6 na Samsung Galaxy S6 ihu bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na otu n'ime ihe kachasị mma n'ahịa dị ka ụwa gam akporo.
Samsung's Galaxy Note na-etu ọnụ mgbe niile igwefoto dị elu na ihe ngosi 4 dị na Galaxy. Na ihe mmetụta nke Otu nọmba megapixels dị ka Galaxy S6 anaghị enye anyị otu onyonyo dị ka nke a, mana ọ dị ezigbo nso.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu data gbasara igwefoto nke 4 Galaxy Note, anyị nwere ike ịgwa gị na ọ nwere ihe mmetụta Sony IMX240 na OIS Smart optical stabilizer.
Obi abụọ adịghị ya Sony bụ otu n'ime ndị na-emepụta igwefoto kacha mma na ahịa Ma olee otu ọ ga - esi bụrụ ihe ọzọ, ekwentị mkpanaaka ha kwụpụtara maka igwe foto ha dị elu. Na nke a Xperia Z3Ọtụtụ na-ekwu na ọ nwere igwefoto kachasị mma n'ahịa, anyị na-ahụ ihe ngosi ihe oyiyi Exmor RS nke nwere sentimita 1 / 2,3 ma tinye ya na 20,7 megapixels nke na-eme ka ihe oyiyi nke oke mma dị.
Tụkwasị na nke a, ọnụ ahịa a sitere na ụlọ ọrụ ndị Japan na-enye anyị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụdịdị na ọrụ iji jiri igwefoto wee nweta ihe oyiyi dị iche iche ma na-atọ ụtọ. Dị ka njedebe ikpeazụ, asambodo IP67 nke ọ gwụsịrị, nke na-eme ka mmiri ghara igbochi ya, na-enye anyị ohere ịse foto mmiri, ihe ọtụtụ ndị ọrụ nwere ekele nke ukwuu.
El Nexus 6 Ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka kachasị ọhụrụ nke Google kwalitere n'ahịa. Emepụtara site Motorola na a Igwefoto megapixel 13 na - enye gị ohere ijide ọmarịcha onyonyo site na mkpọtụ dị ntakịrị.
Maka ndị nwere obi abụọ, Nexus a bụ ekwentị m, ọ bụghị n'ihi nha ya, ndụ batrị ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ kama n'ihi igwefoto m ji obi m kwenyere na ọkwa Samsung, Sony ma ọ bụ LG yana na n'akụkụ ụfọdụ ọbụna karịrị ha.
Anyị nwere ike ikwu na LG G4 bụ otu n'ime ọdụ na-ejikọ igwefoto kachasị mma na ahịa ugbu a, mana ọ bụ nwanne ya nwoke, LG G3, anọghị n’azụ ma na-enye anyị igwefoto dị elu.
con 13 megapixels, sọrọ ikanam flash na ngwa anya image stabilizerN'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ama ama a na-ere ahịa na ihe karịrị otu afọ, ọ na-aga n'ihu na ndepụta a maka oke mma ya. Ọbụna anyị nwere ike ịnweta ohere maka LG G2, nke nweelarịrị igwefoto dị ukwuu nke ejiri mee ka ihe nkwado ihe oyiyi dịwanye mma.
El Huawei P8 Ọ dị n'ahịa maka obere oge, mana ọ jisiri ike zoro na ndepụta a site n'inye anyị igwefoto abụọ dị egwu. Onye na-emepụta ihe na China na-eto eto na oke ọnụọgụ ọkachasị maka mmelite ọ gụnyere na ngwaọrụ mkpanaka ya. Otu n'ime ndozi ndị kasịnụ abanyela na igwefoto.
N'elu P8 a 13 megapixel n'azụ igwefoto jupụtara nhọrọ na ọrụ, nke na-enye anyị ihe oyiyi nke oke mma. Na n'ihu ọnụ anyị na-ahụ igwefoto megapixel 8, nke bụ otu n'ime njirimara nke ụlọ ọrụ ahụ ma na-enye anyị ohere iwere onwe gị dị elu na ọbụna otu selfies nke na-adịghị efunahụ iota nke mma.
Samsung Galxy Rịba ama 3
N'agbanyeghị oge ahụ agafeela kemgbe Samsung kwalitere 3 Galaxy Note Na anyị nọ n'ọnụ ụzọ nke ngosi nke ọhụrụ G alaxy Cheta 5, ọnụ ọnụ a na-abanye n'ime ndepụta a n'ihi igwefoto ya nke na-apụta mgbe niile karịa nke ụdị na obere oge n'ahịa.
Obi abụọ adịghị ya igwefoto kachasị mma nke igwefoto nke ihe ngosi a bụ ihe oyiyi dị nkọ ma kọwaa ya nke ọ na-enweta n'ọnọdụ ọnọdụ gburugburu ebe obibi ọ bụla. Ogo ihe mmetụta ahụ dị ntakịrị oge ochie ma e jiri ya tụnyere taa, mana ọ ka maara otu esi tụọ ihe.
Ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịnweta ama dị elu na ọnụahịa a na-apụghị ịkatọ ọnụ ya na igwefoto dị elu, nke a dị 3 Galaxy Note nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ.
Anyị ekwuola na ihe gbasara Xperia Z3 na Sony bụ otu n'ime ndị na-ese igwefoto kacha mma, nke jisiri ike weta ahụmịhe ahụ na smartphones. Enwere ọtụtụ akwụkwọ mana nke a Xperia Z2 bụ otu n'ime ihe ndị kasị pụta ìhè.
Ọ bụ ezie na ọ dịla n'ahịa ruo oge ụfọdụ Igwefoto ya 20.7 megapixel ya, yana ihe mmetụta ½.3 ”na oghere nke f / 2.0, na-aga n'ihu na ọkwa nke igwe foto kachasị mma na ahịa. Na mgbakwunye, nhazi ihe oyiyi ya karịrị ezigbo onyinye na-enye nsonaazụ dị ịrịba ama.
Dị ka ọ dị n'ihe banyere 3 Galaxy Note, nke a Xperia Z2 nwere ike ịbụ ohere zuru oke iji nweta ama ama ama nwere oke igwefoto nwere igwefoto pụtara ìhè maka obere ego.
Iji mechie ndepụta a anyị na-ahụ Samsung Galaxy S5 nke ahụ na-ebute igwefoto megapixel 16 yana a nso ihe mmetụta sensọ zuru oke (1 / 2.6 ”), na mgbakwunye na nhazi ihe osise kariri nke ọma.
Samsung nwere igwe mkpanaka mgbe niile na ahịa ya na igwefoto dị elu na Galaxy S5 bụ ihe doro anya nke a.
N'uche gị, gịnị bụ ekwentị nwere igwefoto kachasị mma na ahịa?. Nwere ike ịgwa anyị uche gị na oghere edebere maka nkọwa na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Igwe 10 nwere igwefoto kacha mma n'ahịa
Gbanwee aha. ANDROIT ekwentị nwere igwefoto kachasị mma n'ahịa.
Maka na-etinyeghị iPhone ma chefuo banyere lumias (nke na-eweta igwefoto ka mma karịa ọtụtụ n'ime ndị ị tinyere ebe a, ịbụ agadi) ị nweghị ike ịkpọ isiokwu dị ka nke ahụ.
Enter tinye ederede ndị ojii m, m gaghị agụkwuru gị nwata. Gaghị enwe otu pịa ọzọ n’ebe m nọ
José, ọ bụrụ na iPhone 6 adịghị apụta, ọ bụ n'ihi na m na-atụle ma na-atụle na o kwesịghị ịbụ.
Banyere Lumia, ọ bụ eziokwu na ụfọdụ nwere ezigbo igwefoto, mana enweghị obi abụọ ọ bụghị n'ogo nke ndị enwere ike ịhụ n'isiokwu a. Ha nwere ike ịnye ogo dị mma mana n'ọtụtụ oge ha enweghị atụmatụ na nhọrọ.
Ekele gị na onwe gị dịka ịghara ịgụ m, ihe ndị na-adọrọ mmasị ga-atụfu gị.
Ma gị dijo
Ihere na iPhone 6 ọ bụghị na ndepụta a. Kedu ihe mkpofu android onye dere ihe a.
Na-ahapụ ọtụtụ Lumia na-enye nyocha ihe niile ị tinyere.
Lumia 1020, na mgbakwunye na 41 mpxl, pureview technology na ọma karịa ndị niile na gị ntụnyere.
Ọzọkwa, ọ bụ ezie na ọ dịtụla agadi, lumia 925 ...
Nke a na-ete Samsung nke dị na doldrums
Ka anyị lee igwefoto iPhone 6 dị mma mana n'agbanyeghị etu foto ahụ siri dị mma na etu ha siri dị nkọ, ọ ka bụ 8mpx, enwere ike ịnwe ndị mmadụ naanị n'ihi inwe 8mpx elebaraghị ya anya, mana nke ahụ apụtaghị ime ọ bụ a ọjọọ igwefoto. Ọ bụrụ na nwatakịrị bụ ọkachamara gam akporo wee hapụ ya ka ọ dee banyere ihe ọ maara, ọ dị ka ịrịọ mmadụ ka ọ dee post banyere iPhone iji tinye esemokwu ya na Samsung kachasị ọhụrụ, ịkwesighi ịbụ onye zuru oke.
Nke a bụ onye iberibe ọrụ ma ọ bụ rere ya Samsung. Ezigbo mkpofu ederede a, oge ikpeazụ m gụụrụ ya onye nyocha a ma ọ bụ ọkachamara ọkachamara, n’enweghị mgbagha ọ bụla agaghị m atụfu ihe ọ bụla n’ihi na mmadụ na-achọ bụ ozi na-anaghị ele mmadụ anya n’ihu, ọ bụghị mgbasa ozi dị ọnụ ala
Zaghachi Simon Bad
Enwere m Mi4, yana ihe mmetụta 13 mpx na oghere 1.8f / p, Aghọtaghị m ihe kpatara na ị gaghị etinye ya na listi ahụ, ọ were ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ na ya wee si na S5, ọ na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla a ngafe na foto àgwà na ha adịghị ọbụna deigned banyere ya.
Ihe m na-ekwu bụ na ị tinyere igwefoto nke Galaxy S5 ma ị tinyeghị nke iPhone 6, yabụ na ị kpuru ìsì ma ọ bụ na ịnwalebeghị iPhone 6, maka ihe akaebe, ọ dị ka vidiyo 100 na YouTube nke jiri ya tụnyere igwefoto nke S5 na iPhone 6 na eziokwu Ọ dị elu nke ukwuu, anaghị m ekwenye na ndepụta ahụ ma ọ bụrụ na aha ahụ gbanwere, ha bụ igwe foto kacha mma gamsị ma emela ka enyi m kpuo ìsì.
Nexus ka igwefoto ka mma karịa lumia 930, ị kpọghị aha !!! ihe ị ga-agụ !!!
Lumia wetara ọtụtụ nhọrọ na igwefoto karịa ọtụtụ ekwentị ndị dị n'ahịa, enwere m Lumia 640 XL ma tupu nke ahụ enwere m Galaxy S5 ka m gwa gị na Lumia m na-egbu ndị niile edepụtara ebe a. Emechila ya mgbe ị na-eme isiokwu na-ekwu maka smartphones ụwa niile, kama a ga-akpọ ya "The 10 Android Smartphones with the best camera" n'ihi na n'ụzọ ahụ ị gosipụtara naanị na ị maghị ihe ị na-ede, yana ọmụmaatụ ebe ahụ niile bụ ihe kwuru tupu nke m. Kedu ihe ihere, agaghị m alaghachi gụọ blog a ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ekwu okwu dị ka gị!
Njem ụgbọ mmiri, eReader zuru oke na ọnụahịa na-adịghị mma